चीनमा फैलिएको कोरोनाको कारक अमेरिकी सेना : चिनियाँँ विदेश प्रवक्ता – kalikadainik.com
चीनमा फैलिएको कोरोनाको कारक अमेरिकी सेना : चिनियाँँ विदेश प्रवक्ता
शुक्रबार, फाल्गुण ३०, २०७६ | १५:००:३४ |
काठमाडौं । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले चीनमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फैलनुको कारक अमेरिकी सेना भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रवक्ता चाओ लिचियानले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै अमेरिकी सेनाले हुबेईको वुहानमा कोरोना भाइरस भित्र्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
शुक्रबार बिहान चाओले क्यानडेली कन्सपाइरेशन वेबसाइटले उल्लेख गरेअनुसार कोरोना भाइरस चीनको समुद्री खानाबाट नफैलिएको बताएका छन् । वेबसाइटले यो भाइरस अमेरिकामा निस्किएको दाबी गरेको थियो । आधिकारिक एकाउन्टबाट ट्वीट गर्दै चाओले आफूले यसअघि विश्वास गर्दै आएको कुरालाई पनि परिवर्तन गरिदिएको बताए ।
उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिका बिरामी शून्य अवस्थामा कहिलेदेखि थियो ? कति संक्रमित छन्, ती अस्पतालका नामहरु के हुन् ? सम्भवतः तिनै अमेरिकी सेना हुनसक्छन्, जसले वुहानमा कोरोना भाइरस ल्याए। पारदर्शी होऊ, तथ्यहरु सार्वजनिक गर, हामीलाई विस्तृत जानकारी चाहियो।’
गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलोपटक यो भाइरस पाइएको थियो । अहिले यसको संक्रमण विश्वका १२४ मुलुकमा फैलिसकेको छ । यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि करिव ५ हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।